Wareysiyo La xiriira Xukunkii Minnesota Ka Dhacay
Maxkamad ku taala Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa ku heshay Maxamud Sayid Cumar oo ka mid ah Soomalida gobolka deggan 5 dambi oo argagixiso oo ay ku jireen inuu gacan ka geystay in dhalinyaro gobolka ka tagay ay ku biiraan kooxda Al-shabab ee Somalia.
Maxamud Cumar waa 46 jir.
Harun Macruf ayaa hadaba xukunkaasi ka wareystay Xeer Ilaaliyaha Gobolka Minnesota, Todd Jones. Wareysigaasi oo ay inoo koobayaan Maxamed Colaad Xassan iyo Cabdullah i Nuur Kolombo, Waxuu Harun ugu horeyn weydiiyay Todd Jones inuu ka hadlo xukunka ku dhacay Maxamud Sayid Cumar.
Dhageyso wareysiga xeer ilaaliyaha Gobolka Minnesota
Dhinaca kale Harun Macruf ayaa sidoo kale ka wareystay xukunkaasi Maxamed Sayid Cumar oo la dhashay Ninka dambiyada lagu helay ee Maxamud Sayid Cumar, waxuuna ugu horeyn weydiiyay si ay u arkaan go’aanka ay maxkamaddu Gaartay.
Wareysiga Maxamed Sayid Cumar